बिरामी फर्काउने अस्पताललाई सरकारको चेतावनी:: Mero Desh
Published on: १६ चैत्र २०७६, आईतवार १२:५४
काठमाडौं । सरकारले ज्वरो आएका बिरामीको उपचारै नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । कतिपय अस्पतालले ज्वरो आएका बिरामीलाई कोरोना संक्रमणको आशंकामा उपचारै नगरी फर्काइदिने गरेकोमा सरकारले यस्तो पाइए कारबाही गर्ने बताएको हो ।
‘के सरकारी, के गैरसरकारी, के सामुदायिक सबै अस्पतालले आफ्नो दायित्व बुझ्नुपर्ने हुन्छ’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले भने । मन्त्रालयले गरेको प्रेस ब्रिफिङमा उनले यस्ता अस्पतालविरुद्ध कडा कदम चाल्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएका हुन् ।‘संक्रमणकालीन अवस्थामा गरिने नियम हेरेर हामीले काम गरिरहेका छौं, कम्तिमा बिरामी नफर्काइदिनुस्, मन्त्रालयले तोकेको नियमअनुसार उपचार गर्नुहोस्’ प्रवक्ता देवकोटाले भने ।
सरकारले तोकेका कोरोना विशेष अस्पतालहरु, हब अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुले अनिवार्य रुपमा ज्वरो क्लिनिक र आकस्मिक सेवा दिनुपर्ने डा. देवकोटाले बताए । त्यसबाहेक अन्य अस्पतालले पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा यथारुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।
‘कुनैपनि अस्पतालले आकस्मिक सेवा लिन आएका बिरामीलाई अब फर्काउनुहुने छैन भन्ने विश्वास गरेका छौं’ देवकोटाले भने ।
नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएका बिरामीको अवस्था सामान्य रहेको सरकारले जनाएको छ । कोरोना संक्रमित पाँच जनामध्ये एक जनालाई निको भइसकेको छ भने बाँकी चार जनाको उपचार भइरहेको छ ।
दुई जनाको काठमाडौंको टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, एक जनाको धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल र एक जनाको बागलुङको धौलागिरि अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
डा. देवकोटाले सबै संक्रमितको स्वास्थ्यमा जटिलता नआएको बताए ।